Sida loo kiciyo amarka codka Hey Snapdragon ee OnePlus One | Androidsis
Sida loo kiciyo amarka codka Hey Snapdragon ee OnePlus One
Cristina Torres sawir-haye | | OnePlus, Tababarada
In kasta oo ay tahay OnePlus One wuxuu ka mid ahaa boosteejooyinka mobilada ee suuqa qabsaday, gaar ahaan qiimaheeda, laakiin sidoo kale qeexitaankiisa cajiibka ah, iyo sidoo kale naqshad ka yar muuqaal qurux badan, run ma ahan run ka yar noqoshada cusub, iyo hal-abuurnimada xagga farsamooyinka suuq-geynta waa uguyaraan su’aal ku saabsan dhaq-dhaqaaq tijaabo iyo qalad. Mana diidi doonno inay ku qaldameen waxyaabo badan oo ka yimid OnePlus, laakiin sidoo kale waa inaanan ka qaadin mudnaanta helitaanka meeshii ay yimaadeen.
Cusbooneysiinti ugu dambeysay waxay umuuqdeen inay xaliyeen dhibaatada laxiriira guuldarooyinka shaashada ee keenay isticmaaleyaashooda dhanka hoose, kiiskan waxaan rabnaa inaan kuu sheegno xeelad aad dib ugu raaxeysaneyso howlaha OK Google ee kujira bartaada OnePlus One, tan iyo wixii ka dambeeyay XNPH22Q cusbooneysiinta ayaa la sii daayay, shaqadu ma shaqeynayso. Haddii aad ku rakibtay noodhadhkan, wax kasta oo aan hoosta kuugu sheegno ayaa kaa caawin doona inaad mar kale yeelato suurtogalnimada inaad kula hadasho terminaalkaaga dhibaato la'aan. Haddii kale, waxay u badan tahay inay wax walba yihiin sidii loogu talagalay OnePlus One-kaaga, in kasta oo had iyo jeer lagugula talinayo inaad cusbooneysiiso softiweerka, labadaba xagga amniga iyo xaqiiqda inay tahay waxay sii daayaan ikhtiyaarrada had iyo jeer waxtar leh.
Kahor cusbooneysiinta hadda siineysa dhibaatooyinka maareeyaha codka, OnePlus One ayaa ka soo toosay Hey amarka Snapdragon, taas oo ka dhigtay taleefanka inuu fiiro gaar ah noogu yeesho Google Now. Cusboonaysiintaas ka dib, wax ayaa ka dhigaya terminal-ka inuusan ka jawaabin amarka, waxna ma dhacaan marka aan ku hadlayno ereyada sixirka. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo dhibaatooyinkii hore ee shaashaduhu ay ahaayeen kuwo adag in la xalliyo, kuwa la xidhiidha midkan runtii way fudud yihiin. Waa kan shaashadda, oo waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa tallaabooyinka la raacayo si ay wax waliba caadi ugu soo noqdaan xagga dhageysiga codka iyo falalka Google Now ee OnePlus One-kaaga.
Dib u celi Hey! Snapdragon oo ku yaal OnePlus One
Waxa aan qaban doonno waa inaan dib u hawlgalino hawsha hadda luntay iyada oo loo marayo nooca cusboonaysiinta hore. In kasta oo hoosta aan idiinka tagi doono talaabo talaabo ah soo degsashada iyo hababka la raacayo, waxaa muhiim ah in la tilmaamo in wax walboo u mira dhalayaan, waa inaad furayay bootloader furayay. Sidoo kale waa inaad lahaataa soo kabasho qaas ah iyo OPO leh CM11s iyo kernel kayd ah
Jooji ikhtiyaarka xakameynta Google Now haddii horey loo hawlgeliyey
Soo Degso Hey,Hey, Snapdragon Mod oo nuqul ka samee Oppo
Tag si aad uga soo kabsato qaab oo aad u iftiimiso zipka isla marka aad soo dejiso.
Qalabka dib u bilow
Raac dariiqa Jidka> Wakeup Voice. Si toos ah uga hawlgeli halkaa, oo duub codkaaga
Tan, waa inaad heysataa amarka codka oo waa inuu u shaqeeyaa sidii uu horeyba u shaqeyn jiray cayayaanka lagu ogaadey cusboonaysiintaan cusub. Si aad u xiiso badan, waa in la ogaadaa in cusbooneysiinta dhab ahaantii loogu talagalay wax walba inay u shaqeeyaan sidii hore, in kasta oo isbeddel muhiim ah lagu sameeyay arrimaha ku saabsan wicitaannada, iyo haddii ay dhacdo, weedha caadiga ah ee Ok, Google ayaa la isticmaalay. Waxaan u maleyneynaa in si dhakhso leh loo xallin doono, laakiin inta taasi dhacdo, dhammaantiin oo idinka mid ah oo qaba OnePlus One waad uheli kartaan sidii caadiga ahayd dhib la’aan badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Sida loo kiciyo amarka codka Hey Snapdragon ee OnePlus One
Adventure Roguelike Random oo diyaar u ah MUD RPG ugu fiican ee ku saabsan Android?
SamMobile wuxuu na baraa Android 5 Lollipop-ka Galaxy S4